Praiminisitra Ntsay C: ”Ilaina ny fomba fiasa vaovao” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay C: ”Ilaina ny fomba fiasa vaovao”
“Ny zavatra ilaina voalohany: ahoana no hahazoantsika mizara fahefana any amin’ny faritra? Mila fomba fiasa vaovao izany mba hahazoan’ny faritra tena manapa-kevitra haingana dia haingana, hitondra vahaolana amin’ireo olana maro samihafa laharam-pahamehana izay hita any ifotony.” hoy ny Praiminisitra Ntsay Christian, taorian’ny fivorian’ny mpikambana sasantsasany eo anivon’ny governemanta teny Mahazoarivo, afakomaly, momba ny politika vaovao hapetraky ny fitondram-panjakana amin’ny fitsinjaram-pahefana tena izy.
Ny lafiny faharoa nodinihina, tsy ampy ny fampitaovana ny faritra. Betsaka ny tokony hatao sy ho vita haingana, mora atao koa raha manana ny fampitaovana azy ny faritra. Farany, zava-dehibe iray tsy azo hadinoina ny lafiny vola. Apetraka mazava tsara fa misy tamberin’andraikitra tokony hatao. Ireo faritra ahitana harena maro, tokony hisitraka ihany koa ny vokatry ny harena avy aminy.
Mila fanamboarana ny lalàna
Politika vaovao no hamaritra ny rijan-teny rehetra mbola tokony hamboarina amin’ny lalàna misy, eo amin’ireo rijan-teny momba ny fotodrafitrasa tokony hamboarina…. Ao anatin’ny fandinihana izany ny hamaritana ny haavon’ny fitsinjaram-pahefana hapetraka, indrindra ny fahefana tokony hananan’ireo tompon’andraikitra amin’ny faritra, ny kaominina…
“Ny zavatra iombonantsika dia ny hoe tokony hozaraina ny fahefana mba hahazoana manan-kevitra haingana, ary manatanteraka ny zavatra tena ilain’ny vahoaka malagasy ao anatin’ny fotoana fohy”, hoy izy.